China G550 Galvalume Aluzinc Dahaarka Birta gariiradda Warshada iyo soo saarayaasha |Zhanzhi
Gariiradda birta ee G550 Galvalume waxay ka kooban tahay qaab dhismeedka aluminium-zinc, kaas oo ka kooban 55% aluminium, 43.4% zinc iyo 1.6% silicon oo lagu xoojiyay 600 ℃.Waa walxo daawaha ah oo muhiim ah oo inta badan loo isticmaalo nolol maalmeedkeena.
Gariiradda birta Galvalume waxay leedahay sifooyin badan oo aad u wanaagsan: iska caabin daxalka xooggan, kaas oo 3 jeer ka badan xaashi galvanized saafi ah;Waxaa jira ubaxyo zinc ah oo qurux badan oo dusha sare ah, kuwaas oo loo isticmaali karo sida muraayadaha dibadda ee dhismayaasha.
2.Grade: G550, dhammaan si waafaqsan codsiga macaamiisha
9.Alu-zinc daahan: AZ50 ilaa AZ180
10.Spangle: spangle caadiga ah, spangle yar, spangle weyn
11. Daaweynta dusha sare: Daaweynta kiimikaad, saliid, qalalan, daawaynta kiimikada iyo saliidda, daabacaadda ka hortagga farta.
Dusha sare ee daawaynta
* Birta Galvalume waxay ka kooban tahay 55% aluminium, 43.5% zinc iyo 1.5% Silicon.
* Birta galvalume waa mid la samayn karo, la alxan karo oo la rinjiyeeyay.
* Birta galvalume waxay leedahay iska caabin daxalka sare leh xaaladaha ugu badan ee jawiga.Tan waxaa lagu gaaraa iyada oo loo marayo isku dhafka ilaalinta allabariga ee zinc iyo ilaalinta xannibaadda aluminiumka.
Dahaarka Galvalume Steel ka soo baxay-fulin daahan galvanized laga bilaabo 2-6 jeer ka badan maquufin kulul birta galvanized.
* Waxaan la soconaa suuqa Filibiin waxaana ku leenahay macaamiil badan